को हुन् आम आदमी ? ~ Thinksphere
को हुन् आम आदमी ?
4:46 AM Essays, Political Commentaries No comments
आम आदमीबारे लेख्नु छ। आम आदमीको ठ्याक्कै नेपाली अनुवाद के होला? नेपाली अनुवाद नभई नहुने स्थिति छ। कारण, नेपालमा धेरैलाई तुरुन्त आम आदमीजस्तो राजनीतिक दल चाहिएको छ। कतिसम्म भने अरविन्द केजरीवालको 'क्लोन' खत्रुक्क काठमाडाँै उतार्न पाए, फूलमाला लिएर स्वागत गर्नेको जुलुस ठूलै हुने थियो। र, नेपाली अनुवाद नै किन चाहियो भने भारतको अरू सबै थोक चले पनि यहाँ हिन्दी भाषा वर्जित छ। जसै हिन्दी भाषा सुनिन्छ, तसै राष्ट्रवादको प्रेत जाग्छ। प्रेत न हो, जागेपछि अधिक क्षति नपुर्‍याई त्यो मुर्झाउँदैन। त्यसैले राष्ट्रवादी प्रेतसँग पहिल्यै माफी मागेर यो पंक्तिकार हिन्दी नाम नै चलाउँदै छ। किनभने, आम आदमीको साटो आम मानिस वा सर्वसाधारण भन्दा त्यति स्वाद आएन, आउँदैन।
आम आदमीबारे लेख्नै पर्ने अन्य कारण पनि छन्। विद्वान् नेतादेखि खुंखार ट्वीटरकर्मीसम्म आम आदमीको जपनामा लागेको याम जो छ। त्यसमाथि हाम्रा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालामा आम आदमीका नेता अर्थात् अरविन्द केजरीवाल बन्न सक्ने सम्भावनाबारे विमर्श नै सुरु भएको छ। धेरैले त उनी केजरीवाल नबने अर्को चुनावमा उनको खैरयित नभएको बताउन पनि भ्याइसके।
तर, यो नारा उराल्नेहरूले बुझेको आम आदमी भनेका को हुन्? केजरीवालले परकिल्पना गरेको आम आदमी नै हाम्रा पनि आम आदमी हुन् त? वा, नेपाली आम आदमीको चरत्रि फरक छ? आम आदमी को हुन् त, काठमाडौँमा चौडा पारिएको सडक देखेर खुसी हुने वा सडक ठूलो वा सानो हुनुसँग चासो नभएकाहरू? वामपन्थी सरकारको आँखाको कसिंगर बनेका वाग्मती किनारका सुकुमबासी या हरेक बिहान आइफोन बोकेर मृगस्थली विचरण गर्ने मधुमेहका रोगीहरू? बिजुलीको वायरङि् देख्न नपाएका झुप्रामा बस्नेहरू हुन् कि घरमा इन्भर्टर जडान गर्नेहरू? खुला दिसा मुक्त नभइसकेका गाविसका बासिन्दा हुन् या भर्खरै खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर सगर्व उभिएका एनजीओकर्मीहरू? अनि, श्रम गर्न विदेश जानेहरू जो लासमा परिणत भएर बाकसमा फर्किन्छन्, को हुन्?
भारतको टाइम्स अफ इन्डिया पत्रिकामा व्यंग्यचित्रकार आरके लक्ष्मणले 'कमन म्यान' अर्थात् आम आदमी शीर्षकमा कार्टुन शृंखला कोरे। उनको आम आदमी हरेक बिहान उठेर पत्रिका हेर्ने सहरयिा सर्वसाधारण थियो। लक्ष्मणकै शब्दमा, जो हरेक बिहान महँगी बढेको, कर वृद्धि भएको, आतंकवाद फैलिएको, भ्रष्टाचार सल्केको, खानेपानी अभाव भएको र विद्युत्मा लोडसेडिङ् बढेको जस्ता हेडलाइनहरूको अभिवादन चुपचाप स्वीकार्न बाध्य छ, ऊ आम आदमी हो। भारतका प्रभावशाली सञ्चारमाध्यमले व्याख्या गरेको आम आदमी लक्ष्मणले भनेजस्तै हो। अर्थात्, ती मानिस नै आम मानिस हुन्, जसको बस्ने बन्दोबस्ती भइसकेको छ तर सुविधा पुगेको छैन। उनीहरूले भनेजति अनुपातमा सडकको प्रयोग गर्न पाएका छैनन्, घरमा धारो छ तर पानी प्रशस्त खस्दैन, बिजुली जडान गरेको भए पनि पुग्दो बिजुली उपभोग गर्न पाएका छैनन्।
लक्ष्मणका आम आदमी ती होइनन्, जो मुकेश अम्बानीको गगनचुम्बी घर अघिल्तिर उभिएर 'रोटी, कपडा, और मकान'को नारा लगाइरहेका छन्। ती पनि होइनन्, जो कुनै समुदायको सदस्य भएकै कारण आफ्नो थातथलोबाट खेदिएका छन्। कार्टुनको आम आदमीमा ती आदिवासीको छायाँ छैन, जसका जग्गा कर्पोरेट जमातले खोसेको छ। जसले पेटभरि खान, आङ छोप्ने गरी लगाउन र राम्ररी ओत लाग्ने छानोसम्म पाएको छैन, उसले टाइम्स अफ इन्डिया के पढोस्? लक्ष्मणका धेरैजसो पाठक उनले कार्टुनमा कोर्ने गरेका खान-लगाउन पाएका सुकिला आम आदमी हुन्। र, तिनैका प्रतिनिधि हुन् केजरीवाल। उनलाई सघाइरहेकाहरूको दाबी के छ भने 'रोटी कपडा और मकान' नपाएर छटपटाएका जनताका पनि आशाका केन्द्र बनेका छन् केजरीवाल।
के यी दुई खाले आम आदमी एकै ठाउँमा अटाउन सम्भव हुन्छ? तर, सुरुआतका संकेतहरू त्यति सकारात्मक छैनन्। दिल्ली राज्य जसोतसो आफ्नो हातमा लिएपछि उनले सुकिला आम आदमीका लागि पानी र बिजुलीको तत्काल बन्दोबस्त गरेका छन्। तर दोषी पाइएका केही थान प्रहरीलाई निलम्बन गर्न नसक्दा उनकै सडकको बास भयो। यद्यपि, उनको त्याग र उत्साह सलाम योग्य नै थियो। तर, बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने उनको सडक बास लामो नाटकको एक सामान्य 'प्रोलग' मात्रै हो। अब कर्पोरेट जगतसँगको लडाइँ बिस्तारै सुरु हुँदै छ। वालमार्टजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा भित्रैका टाटा वा अम्बानीसँग सोझो लडाइँ जसै सुरु हुन्छ, केजरीवालका सामुन्ने मात्र दुई बाटा देखा पर्नेछन्। पहिलो मैदान छोडेर भाग्ने, दोस्रो सम्झौता गर्ने। मैदान छोड्नुको परण्िााम केजरीवालको ठाउँ कि नरेन्द्र मोदीले लिन्छन् कि राहुल गान्धीले। मोदी चर्का विकासवादी, जसलाई रोटी कपडावाला आम आदमीको कुनै पर्बाह छैन। राहुलको वर्ग चरत्रिको व्याख्या गररिहन जरुरी छैन। राहुल र मोदीबीच धेरै भिन्नता खोज्ने उद्यम गर्नु नै पनि फजुल हुन्छ। र, केजरीवालले सम्झौता गरेर अघि बढ्छु भन्नु नेपालका माओवादी हुनु हो, असफल र परत्ियक्त।
नेपालमा केजरीवालको क्लोन खोजिरहेकाले आफूजस्तै आम आदमीहरूको नेताको परकिल्पना गरेका हुन्। उनीहरूले सुशील र रामशरण महतहरूमा केजरीवाल बन्ने सम्भावना देख्नु स्वाभाविक हो। सीमित मान्छेको पहुँचमा पुग्ने गरी केही विकासका कार्यक्रम ल्याउन र काठमाडौँका लागि थप केही सुविधा उपलब्ध गराउन उनीहरूलाई केजरीवाललाई जति हम्मे पनि पर्ने छैन। सुशील, केपी ओली वा महतहरूलाई प्रस्ट देखिने र सानोतिनो भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने उति आवश्यकता पनि छैन। किनभने, पुगिसरि आउनु पनि 'लोकतान्त्रिक' नेतामा चाहिने गुण नै हो। त्यसैले यो भन्न सकिन्छ कि सुकिलाहरूको केजरीवाल बन्न उनीहरूलाई मार्ग प्रशस्त भएको छ।
तर, प्रश्न हामीलाई कस्तो केजरीवालको आवश्यकता छ भन्ने हो। वर्षौंदेखि गरबिीको मारमा पिल्सेका जनता, हस्ताक्षर गर्नसम्म नजानेर त्रिभुवन विमानस्थलमा अलमलिएका श्रमिक, जन्मबाटै अलगाव र असम्मान भोग्दै आएका, कुनै खास क्षेत्र र जातकै कारण पछि परेका दुःखीजन हाम्रा आम आदमी हुन्। तिनको आवाज बोल्ने केजरीवालहरूको उपस्थिति कति छ, संविधानसभामा? के उनीहरूको संविधान लेखनमा प्रभाव पार्न सक्ने सामथ्र्य छ? यी प्रश्न गम्भीर किन हुन् भने अहिलेलाई संसद्भन्दा संविधानसभा हाम्रा लागि बढ्ता महत्त्वको ठाउँ हो। तर, नोबेल पुरस्कार विजेता विख्यात पोलिस कवयत्री विस्लावा सिम्बोस्र्काले लेखेकी छन् ः
जस्तो कि तपाईंले देखिसक्नुभएको छ
प्रत्येकपटक त्यही हुन्छ,
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नलाई
सबभन्दा निरर्थक साबित गरिन्छ ।
स्थानीय चुनावको जाल
ओलीलाई सन्चो, लोकतन्त्र बिरामी